Priyanka Chopra oo ka shaleyneeso xayeysiis ay u sameesay kareemka la isku cadeeyo! – Filimside.net
Priyanka Chopra oo ka shaleyneeso xayeysiis ay u sameesay kareemka la isku cadeeyo!
Atirishada caalamiga ah Priyanka Chopra ee haatan la shaqeyso Hollywood iyo Bollywood ayaa banaanka soo dhigtay dareenka ku aaday inay ka qoomameeneyso xayeysiis kareemka la isku cadeeyo oo ay hada ka hor sameesay.
Sanidihii ugu dambeeyay dooda ku aadan dadka caanka ah inay xayeysiis u sameeyaan kareemka jirka la marsado ee la iska cadeeyo ayaa sii xoogeesaneesay waxayna dadka qaar u arkayeen in bulshada lagu qaldaayo xayeysiimahan kala duwan.
Priyanka marar kala duwan ayay xayeysiisay kareemka la isku cadeeyo ee muranka badan Hindiya ka dhaliyo waayihii hore balse hada arinkaas wey ka shaleesay xili ay wareysi siineesay wargeyska PAPER magazine ee xaruuntiisa magaalada New York tahay.
PC waxay tiri “Aadban ooga shaleenayaa inaan xayeysiin jiray kareemka la iska cadeeyo, waxay ila tahay wixii ugu raqiisanaa inaan xayeysiiyay, waana ka xumahay hadii ay jiiraan dhalin dartedyda kareemyadaas u adeegsadeen marka ay xayeysiiskeyga daawadeen xili hore”
“Aniga ahaan markii aan dhalin yaraa kareemka la isku cadeeyo ayaan marsan jiray si jirkeyga midibkiisa u ifo laakiin hada lagama yaabo inaan adeegsado dhalintana waxaan dhihi lahaa midibkiina dabiiciga ah ku kalsoonaada”
Waxaa Aqrisay 610